मेहनतले नै मान्छेको जीवन परिवर्तन हुन्छ : खातुन | newdnn.com
मेहनतले नै मान्छेको जीवन परिवर्तन हुन्छ : खातुन
१३,आईतवार १७:२२ newdnn.com
– मध्य नेपाल ।
मुस्लिम समूदायमा जन्मिएर पनि आफ्नो संघर्षबाट उज्वल भविष्य बनाउन अग्रसर मोमिला खातुन पछिल्लो समयमा पर्साको चर्चित नाम बनेको छ । पर्सा जिल्ला वीरगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर-२ छपकैयामा बुबा अतिउल्लाह मिया र आमा जैनब खातुनको कोखबाट जन्मेकी मोमिला खातुन आफ्नै कडा मेहेनतबाट यति चर्चित बनेकी हुन् । सातजना बालबच्चाकी आमा समेत रहेकी खातुनको विवाह २५ वर्ष अगाडी वीरगन्जकै अनुवर मिया चुरिहार सिद्दीकी संग भएको हो ।
आफ्नै समाजका महिलाहरु अतिनै पिछडिएको कारण मुस्लिम परिवारमा जन्मिएर पनि अब घुंघटबाट बाहिर निस्किनु पर्छ भन्ने अठोटका साथ सुरुका दिनमा निकै कडा मेहनत गरेको उनले आफ्नो अनुभव सुनाइन् । सुरुका दिनमा गाउँ र वडामा तल्लो तहसम्म पुगी महिलाहरुलाई भेला गराई महिलाहरुको जिवनस्तर उकास्ने अभियानका रुपमा समूह बनाएर १०/१० रुपैयाँ बचत संकलन गर्न थालेको उनले बताइन् । त्यहि १० रुपैया संकलन गर्न थालेको समूहको विस्तारित रुप २०६४ असोज ३० मा एकता महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को स्थापना भएको हो । सुरुमा ९ जना महिलाहरु मिली संस्था दर्ता गराई ९ जना नै संचालक समिति रहने गरी यो संस्था संचालनमा ल्याएका थियौं । सहकारी संस्था स्थापना अघि विभिन्न ( गुलिया ) समूहबाट संकलन भएको एकलाख पच्चीस हजार रकम आपसमा लगानी गर्न सहकारी संस्थाको आवश्यकता महसुस गरियो । फलस्वरुप सो संस्थाको समृद्धिमा लुमन्ती भन्ने संस्थाको श्रेय ठूलो रहेको खातुनले बताइन् । आफूहरुले सुरुका दिनमा घुम्टोभन्दा बाहिर निस्कने प्रयास नगरेको भए आजको एकता बचत तथा सहकारीको जन्म र यो संस्थाको साथमा आफ्नो आर्थिक अवस्था माथि उठाउने सयौं व्यक्तिको अवस्था पुरार्नै हुने थियो ।
यही संस्थाको माध्यमबाट यो संस्थाको गरिमामय पदमा अध्यक्ष समेत रही विदेश भम्रण गर्ने मौका म जस्तो नपढेको मान्छेले पाउनु कम चानचुने कुरा होइन । यहि सुरुको आँट र मेहनतले म बङ्गलादेश, बैंकक लगायत विभिन्न ठाउँमा गएर आउँदा जादाँ न्य, क्ष् पलयध, यप, जस्ता भाषा समेत बोल्न सिकें । अनि बचत कसरी गरिन्छ । लेनदेन व्यवहारको तरिका लगायतका विधिहरु थप प्रभावकारी कसरी बनाउँन सकिने जस्ता टिप्स पनि सिकेर आएँ । सो अनुसारको प्रयोग आफनो संस्थामा पनि गर्दा अहिले एकता बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अहिलेको कारोबार २ करोड सम्म भएको छ । यहाँ सम्म आईपुग्दा मेरो श्रीमान् र छोराको प्रेरणाबाट अझ अगाडी पुगेकी छु । तिनै आफनो जिवनकालमा सर्घषले नै जीवनलाई बद्लिदिन्छ भन्ने अठोटका साथ कर्तव्य पथमा लागेको मोमिला खातुनसँग मध्य नेपाल सन्देशका लागि गरिएको थप कुराहरुः-
तपाईको पहिचान यस क्षेत्रमा कसरी स्थापित भएको हो ?
लुमन्ती नामको एक सहकारी संस्थाले महिलाहरुको जिवनस्तर उकास्ने कार्यक्रम लिएर गाउँघर आउँदा सो कुरा राम्रो लागेर अझ आफ्नो समूह सहित अग्रसर भई निरन्तर संघर्ष गरिरहँदा अहिले आफनो नाम, दाम र पहिचान स्थापित भएको महसुस गरिरहेकी छु ।
तपाई एक मुस्लिम महिला । तपाईको कार्य सम्पादनमा समाजले हेर्ने दृष्टिकोण र समाज तथा परिवारको कस्तो रहेको छ ?
म एउटा मुस्लिम परिवारकी महिला भएको कारणले यो कार्यमा लाग्दा केही आलोचनात्मक कुराहरु सुरुका दिनमा सुन्न नपरेको भने होइन । तर मेरो उद्देश्य राम्रो भएको कारणले ठूलो सोच राखी आफनो कार्यमा लागिरहँदा पछाडी फर्कनु परेको छैन । त्यसमा पनि मेरो घर परिवारको सहयोग र स्नेह रहेपछि परिमाणमुखी उपलब्धि भइरहेको छ ।
तपाईको जिवनसंग सहकारी कसरी जोडियो ?
गरिबी हटाउँ, महिलालाई अगाडी बढाउँ भन्ने नाराका साथ लुमन्ती संस्था अगाडी बढिरहेको र हामी लगायतका महिलाहरुलाई चेतना मुलक कार्यक्रम गर्दै रहँदा बचत गर्नु पर्छ भन्ने थप प्रेरण मिल्यो । त्यसको निम्ति सहकारीमा लाग्नुको कुनै विकल्प नभएकोले सहकारीमा जोडियो ।
कसको प्रेरणाले घरबाट निस्किनु भयो ?
मेरो श्रीमान् र छोराको प्रेरणाबाट घरदेखि बाहिर निस्किएकी हुँ ।
विदेश भ्रमणको अनुभव कस्तो रह्यो ?
विदेश भ्रमणले केही भाषा र बचत तथा ऋणका थप व्यवहारिक पक्षहरु पनि सिक्ने मौका मिल्यो ।
९ जना मिलेर सुरुका दिनमा अगाडी बढेको भन्नु भयो । त्यसमा चाही को को हुनुहुन्थ्यो ?
एक्लैले समूहको काम कहिले पनि सफल हुँदैन । त्यसैले मेरो एक्लो योगदान मात्र होइन । मसँगै हातमा हात मिलाएर अगाडी बढ्ने सुरुका साथीहरुमा मोमिला खात्ुन, उसा देवी, मजबुन खातुन, आशमा खातुन, मिनादेवी, सुनिता कानु, मन्जु देवी रमावती तुराहा र कल्मा खातुन थियौं ।
“सबै अधिकार गाउँघरबाटै पाइने भएकाले त्यत्तिकै क्षमतावान् हुनुपर्छ”
‘निजि विद्यालय सञ्चालकविरुद्ध बाध्यात्मक कारबाही गर्ने बेला आएको छ’
‘मनमा आयो भन्दैमा नपढेर साहित्य लेख्न अब सकिदैन’
‘पहिले विद्यार्थीलाई फेल बनाइन्थ्यो, अहिले अलमल्याइयो’ : कोइराला
‘केहि सैद्धान्तिक गल्ती र टिकट वितरणमा कमजोरी भयो’